SopCast bụ oké ụzọ na-ekiri ọkacha mmasị gị omume iji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ. Oké ihe bụ na SopCast bụ free. SopCast-enye gị ohere na-ekiri ma ọ bụ na-ege ntị vidiyo ma ọ bụ audio n'elu internet. Ị nwere ike iji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka ngwá ọrụ na-ekiri ndị video.
Nkebi nke 1: Ikiri SopCast on Windows
Part 2: Fim SopCast on Mac
1. Open SopCast na abanye na ọrụ ahụ. Mgbe usoro ihe omume ga-emepe n'ime isi window. Ị ga-ahọrọ mpụga ọkpụkpọ ebe ị pụrụ ịchọta nhọrọ nke VLC ọkpụkpọ na dị nnọọ họrọ ya. SopCast na abanye na ọrụ ahụ. Ị nwere ike na-agagharị site na kọmputa gị iji chọta VLC ọkpụkpọ. Dị nnọọ ma e wezụga site na ịpị OK.
2. Ụzọ ọpụpụ SopCast na ẹkedori ya ọzọ. Abanye na wee mepee ọwa na ị chọrọ ile site na ndepụta nke website.
3. Ugbu a ẹkedori VLC iche iche. Gaa media na mgbe ahụ na-emeghe na netwọk. Ị nwere ike iji na-egosi ndị ọzọ nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịchịkwa bandwit. Nịm SopCast ka gụgharia adreesị.
Nkebi nke 2: Fim SopCast on Mac
Mac ike ghara ikwe ka echichi nke SopCast ozugbo. Iji na-agba ọsọ SopCast, ị na-achọ iji wụnye Wine ngwa. Nke a bụ n'ihi SopCast na-agba na .exe faịlụ mgbe Mac nwere ike na-akwado .dmg faịlụ na-ndabara ndọtị maka faịlụ na Mac.
Wine ngwa na-enye ohere Windows software na-agba ọsọ na gị Mac site n'ịsụgharị ndị a .exe faịlụ n'ime .dmg faịlụ na gị Mac ike ịmata. Wụnye SopCast-eji mmanya na gị Mac. Ọzọ ihe, jide n'aka na ị nwere VLC ọkpụkpọ na gị usoro. Ugbu a iji na-eso nzọụkwụ ịtọ SopCast on VLC.
1. Ihe mbụ ị ga-eme bụ iji nweta a SopCast akaụntụ. Ị nwere ike mgbe niile nwere free akaụntụ ma cheta na ị ga-abanye na oge ọ bụla ẹkedori ya. E nwere ma free na akwụ ụgwọ ọrụ. Ozugbo omume ga-emepe ka isi ihuenyo, pịa nhọrọ button na-aga na-ahọrọ mpụga ọkpụkpọ. Ị ga-enwe na-agagharị na site na gị usoro maka executable faịlụ nke VLC nke na-abụkarị n'okpuru Utilities. Ozugbo i họrọ VLC, na-anabata mgbanwe.
2. Ụzọ ọpụpụ SopCast na-emeghe ya ọzọ. Abanye na ọzọ wee na-emeghe a ọwa na-ekiri site na ndepụta na adreesị "SOP: //" adreesị.
3. Ugbu a, ẹkedori VLC ọkpụkpọ-eme ka n'aka ma omume na-emeghe. Ihe dị mkpa bụ jide n'aka na ị mara adreesị nke SopCast adreesị mmanya. Ị nwere ike iji mmanya na-ekiri ndị ọhụrụ ọwa site nanị na-abanye adreesị.
4. Na VLC, na-aga Njikwa menu na click on emeghe netwọk. Ị nwere ike mado a njikọ kpọmkwem http://127.0.0.1:8902/tv.asf na-amalite nkwanye na video.
Nzọụkwụ bụ ntakịrị mgbagwoju anya na ị na-chọrọ iyi, nke nwere ike na-a mgbe iji wuchaa. Ọ dị mkpa iji mụtakwuo banyere nkwanye na nke ndị VLC.
> Resource> Windows> Olee otú iji Play SopCast on VLC?